Torohevitra 8 Ampio hanampiana ny fifandraisana amin'ny faharoa amin'ny fahombiazana - Fifandraisana
Torohevitra 8 Ampio hanampiana ny fifandraisana amin'ny faharoa amin'ny fahombiazana
Ka te hanome fotoana hafa ny vadinao ianao. Te hamelona ny fifandraisana nifanaovanao tamin'izy ireo ianao.
iza no maty indrindra tao dbz
Ary amin'ity indray mitoraka ity dia tianao ny hiasa. Tianao ho tsara kokoa, salama, matanjaka kokoa.
Ahoana ny fomba ahitanao ny manamboatra zavatra izay mazava tsara fa vaky tsara mba hahatonga azy saika - na tena izy - hiafara amin'ny fisarahana?
Ity misy torohevitra vitsivitsy mba hahombiazan'ity fifandraisana mety ity.
1. Alao antoka fa tianao izany.
Ny fonao dia tsy maintsy manolo-tena amin'ity fifandraisana ity raha te haharitra amin'ity indray mitoraka ity.
Azo antoka fa mety manana fisalasalana na tahotra momba izany ianao, saingy mila maniry farafaharatsiny mba hiasa tsara ilay fifandraisana.
Fa azo antoka fa nomena izany, sa tsy izany? Tsy voatery.
Angamba ianao nilefitra tamin'ny faneren'ny vadinao hamela zavatra hafa. Vonona ny hampitsahatra ny fifandraisana ianareo fa nilaza foana izy ireo fa tsy hitovy amin'ity indray mitoraka ity fa hiova izy ireo. Ary na mino marina izany ianao na tsia, dia niloka tao ary nanaiky ny hifikitra amin'izany.
Na angamba ianao mihevitra ny hanome azy ireo fotoana faharoa fa tsy hiatrika ny fahatsinjovan-tena ho mpitovo. Ny fisarahana dia tsy famaranana foana, fa azo antoka fa afaka mahatsapa toy izany amin'izay fotoana izay ary tsy te-hametraka ny tenanao amin'izany fahoriana izany fotsiny ianao.
Avy eo dia misy ny toe-javatra misy ny zanaka na ny fanambadiana na tantara lava fotsiny eo aminareo roa. Ny fiainana tsy misarona izay miara-tenona akaiky dia mety ho fanamby, fa tsy ny iray izay sitrakao ankehitriny.
Ianao ihany no tokony. Satria raha tsy ao anatiny ny fonao dia maty antoka hatrany am-boalohany ny fiarahana ary aleo samy misaraka ianao izao.
2. Mifampiresaka, mifampiresaka, mifampiresaka.
Eny, tena ilaina ny fifandraisana tsara amin'ny fifandraisana rehetra, fa tena ilaina tokoa izany amin'ny fifandraisana vintana faharoa.
Nisy ny tsy nety tamin'ny fihodinana voalohany sy ny fomba tsara indrindra hiasana amin'ny inona izany dia ny mifampiresaka.
Tsy resaka iray na roa lehibe fotsiny momba ny fomba ahafahanao mandroso amin'ny maha mpivady, fa miresaka tsy tapaka sy marina momba izay tsapanao.
Angamba ianao tsy dia mahay mifampiresaka - raha izany dia mianara sy manazatra. Raha tsy azonao atao ny mifanakalo hevitra momba ny fihetseham-ponao na izay olana mety hitranga, dia tsy hisy hamaha izany.
Arakaraky ny avela tsy hitandremana ireo zavatra ireo no hitomboan'ny fahatsapana tsy fahasalamana indray, ary arakaraka ny maha-lehibe ny fahafahan'ny fifandraisana hafa.
Mety hanampy amin'ny fanaovana fivoriana tsy tapaka miaraka amin'ny mpanolotsaina momba ny fifandraisana mandritra ny volana maromaro voalohany mba hahazoana antoka fa misy ny fitarainana ary voavaha ny olana.
Tena mamporisika ny serivisy an-tserasera izahay. Afaka manana fotoana miaraka amina manam-pahaizana voaofana avy amin'ny fampiononana ao an-tranonao ianao. Ho gaga ianao fa afaka manampy an'izany izy.
3. Fantaro ny lamin'ny fifandraisana tsy salama ary asio dingana mba hisorohana azy ireo.
Omenao ny sakaizanao ve ny fitsaboana mangina isaky ny mahasosotra anao izy ireo?
Tezitra ve izy ireo na sosotra raha tsy omenao fotoana irery irery izy ireo?
Diniho ny fifandraisanareo hatrizay ary tadiavo ireo toe-javatra miverimberina izay nahatonga ny iray na ianareo roa ho sosotra.
Zava-dehibe ny fahalalana hoe inona no miteraka vanim-potoana tsy mampitony na fifanolanana eo aminareo roa tonta amin'izay hahafahanao mitady fomba hisorohana ireo zavatra ireo.
Raha ny namanao dia nametraka ny sakaizany sy ny fialam-boliny talohan'ny fotoana kalitao niaraka taminao, ny iray amin'ny fepetra hanomezana azy ireo fotoana faharoa dia mety ho hariva na faran'ny herinandro natokana handanianao fotoana roa fotsiny ianao.
Na raha toa ianao ka mazàna mikarakara fitantanan-draharaha ny olon-tianao dia mila atao aloha ny resaka alohan'ny tsy aharetany aminao.
Izany dia tonga amin'ny famaritana ireo teboka fanaintainan'ny tsirairay. Raha vantany vao fantatrao hoe iza izy ireo, dia azonao atao ny manandrana mafy kokoa mba tsy handratra azy ireo amin'ireny fomba ireny.
4. Adiresy ireo olana izay mbola tsy voavaha.
Tena azo inoana fa nisy olana lehibe kokoa teo amin'ny fifandraisanareo izay nanosika azy io ho amin'ny sisin-tany.
Na inona na inona ireo zavatra ireo, dia hanaloka ny fikasana hanandrana indray izy ireo raha tsy voalamina sy voavaha.
Inona ireo olana ireo?
Mety hisy ny tsy fahatokisan-tena eo aminao noho ny lainga na famadihana karazan'olona.
Angamba ny singa ara-batana amin'ny fifandraisanareo dia nanjavona tanteraka noho ny antony sasany.
Angamba ny iray aminareo avelanao handeha tsy voatsabo ny fahaketrahana fa tsy hiatrika ny marina sy hitady fanampiana.
Na inona izany na inona dia mila miasa ianao hametrahana ny olana eo am-pandriana, na farafaharatsiny mitady fomba hiatrehana azy tsara kokoa.
5. Mametraha fetra mahasalama.
Angamba ianao efa nanana fetran'ny fifandraisanareo. Mety ny fiampitana ny iray amin'ireo tsipika mena ireo aza no nanjary nahatonga ny zavatra ho ratsy teo am-boalohany.
Na izany na tsy izany dia tonga ny fotoana hamerenanao ireo fari-pitsipika ireo ary hametrahana sisintany vaovao raha ilaina.
Tsy voatery hametraka azy ireo fotsiny ianao, fa mila mampita azy ireo mazava tsara mba hahafantaran'ny tsirairay aminareo izay misy sy tsy ekena.
Midika izany fa mangarahara tanteraka momba izay andanianao vola ampiarahina amin'ny loharanom-pahalalana ary misy singa iray amin'ny fandaniana miafina teo aloha.
Mety hidika izany hoe iza ianao ary tsy mahazo mifanakalo hevitra amin'ny olon-kafa momba ny fifandraisana. Angamba tsy tianao ny hizarana ny raharaha manokana amin'ny sakaizan'izy ireo na ny fianakaviany.
Angamba ianao mitady fetra henjana amin'ny fotoana lanin'ny namanao hampiasana anao amin'ny ray aman-dreniny. Ny fitsidihana tsy tapaka dia zavatra iray, ny fampisehoana azy ireo hisotro dite isan'andro dia mety hangataka zavatra be loatra.
Na inona na inona fetra tsapanao fa mila apetrakao mba hahombiazan'ny fanindroany ny fifandraisana dia ataovy izany ary ataovy mazava tsara hoe inona ireo fetra ireo mba tsy hisavoritahana.
6. Aza manohy mitondra ny lasa.
Na dia tsy ilaina aza ny fanararaotana faharoa dia manadino izay rehetra tonga taloha, dia tokony hidika izany fa tsy hampiakatra fanaintainana na fihetsika miverimberina.
Raha samy mitazona ny lasa mihoatra ny lohan'ny iray ianareo, dia hiteraka fahatsapana alahelo sy fifandirana fotsiny izany.
Tsy mila avelanao ny bygones ho bygones ary hamela ny helok'izay rehetra nataon'izy ireo niaraka tamin'izay, saingy tsy tokony hampiadiana amin'ny lasa ianao mba hahazoana tombony amin'ny vadinao.
Mbola afaka mahatsapa ireo fahatsapana ireo ianao ary miasa aminy rehefa mandeha ny fotoana, ary mety hisy vokany eo amin'ny fihetsikao amin'ny zavatra ataon'ny vadinao izany. Saingy tena tsy mitovy amin'ny mihady mazava ny taolana tranainy hanenjehana azy ireo.
Ity dia faritra iray hafa izay afaka manampy tokoa ny torohevitra momba ny fifandraisana. Mety hahatsapa ianao fa ilaina ny mifanakalo hevitra momba ireo ratra taloha, saingy tsara lavitra kokoa ny manao izany amin'ny alàlan'ny ankolafy fahatelo tsy miandany - ary amin'izao fotoana izao ihany.
Raha tsy izany dia hiasa toy ny rojo vy eo amin'ny vodin-kitramin'ny fifandraisanareo izy ireo ary manakana azy tsy handroso amin'ny ho avy mamiratra kokoa.
7. Ataovy ny ezaka.
Tsy misy manodidina ny zava-misy fa ny fifandraisana vintana faharoa dia mitaky asa sy ezaka be dia be avy aminareo roa.
Tsy mora - na amin'ny lafiny ara-batana na ara-pihetseham-po - ny mamely ny bokotra reset ary manandrana manomboka indray .
Mila miezaka ianao mba hahatsapa ho mahatsiaro tena araka izay azonao atao rehefa miresaka ny fihetsikao, ny fizotran'ny eritreritrao ary ny fifandraisanao amin'ny tsirairay.
Raha tsy mametraka ny ezaka ianao dia azo antoka fa hiverina any amin'ireo lamina tsy mahasalama tamin'ny lasa ianao, ary efa fantatrao ny làlan'io lalana io.
Ny ezaka dia mety hitranga amin'ny endrika maro samihafa, ny sasany izay efa noresahintsika.
Fifandraisana, fandaniana fotoana miaraka, fianarana indray ny tiana sy ny tsy fitiavana an'ilay olon-kafa, mifaneho fitiavana sy fitiavana. Ireto no karazan-javatra ilainao ilofosana mafy raha te hanana ny fifandraisana salama sy mirindra tadiavinao.
Ny fanovana dia tsy mitranga tampoka. Ary ovao ny fifandraisanareo tsy maintsy ataonao raha te hiasa ianao amin'ity indray mitoraka ity.
Na dia sarotra aza izany dia tokony hiezaka ny haneho ny faharetana ilainareo roa hifanaraka amin'ny zava-misy vaovao amin'ny fifandraisanareo.
Samy hilatsaka ianao - ary tsy indray mandeha fotsiny fa im-betsaka. Azonao atao ny mamakivaky ny fari-tanin'ny tsirairay avy, miverina amin'ny fahazarana taloha, na mifampiahiahy amin'ny fomba iray amin'ny fomba samihafa arivo.
Fa raha samy maniry hiasa io fifandraisana io dia tsy maintsy mifanapatapaka ianareo.
Ankehitriny, tsy midika izany fa avelanao hitosaka mandrakizay ny zavatra. Ilay olona iray hafa dia tsy maintsy mampiseho mariky ny fanovana, na dia mihemotra iray isaky ny roa ampandrosoiny aza izy ireo.
Ny faharetana dia hanampy amin'ny fitazonana ny firindrana rehefa mampandroso tsikelikely ny fandrosoana tianao hatao ianao.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hampandeha ny relatioinship anao amin'ny fanandramana faharoa?Aza mandeha irery amin'ity lalana ity raha afaka mahazo torohevitra manam-pahaizana avy amin'ny mpanolo-tsaina manana fifandraisana voaofana. Na miresaka irery amin'izy ireo ianao na amin'ny mpivady dia afaka mitarika anao izy ireo ary mampitombo ny fahafaha-mamorona fiaraha-miasa sambatra sy salama.Ka maninona raha mifampiresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hamantatra. Tsotra.
Fitsapana 10 tsy maintsy lalovan'ny olona alohan'ny hanomezana tombony faharoa amin'ny fifandraisana
Ahoana ny famelana heloka ny olona: maodely roa mifototra amin'ny siansa momba ny famelan-keloka
Fifandraisan-dàlana indray mandeha indray: Ahoana ny fomba hanapahanao hevitra hoe inona no tena tadiavinao
afaka miova fitiavana ve ny lehilahy?
avy amin'ny mahery loatra ny ankizivavy
maninona ny lehilahy no manintona rehefa raiki-pitia
rehefa mahatsapa olon-kafa ianao